भिजियो खोज्दै ... उर्फ ​​... व्यक्तिहरू किन म्याकमा छन् भनेर चकित हुँदै Martech Zone
भिजियो पत्ता लगाउँदै ... उर्फ… व्यक्तिहरू किन म्याकमा छन् भनेर चकित हुँदै
शुक्रबार, मार्च 28, 2008 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
विगतमा भएका म किन माइक्रोसफ्ट प्रयोग गर्दैनौं भनेर मानिसहरूले आश्चर्य गर्छन्। केही व्यक्तिहरू सोच्दछन् कि सम्पूर्ण पीसी / म्याक चीज केवल एक ठट्टा हो। मैले सोचें पीसी बनाम म्याक कुरा केवल एक मजाक थियो, पनि। यो हो छैन। म आधिकारिक रूपमा अब म्याक मा छु एक वर्ष.
र म बिग्रिएको छु।
म्याकमा काम गर्ने बारेमा सब भन्दा नराम्रो कुरा भनेको पीसीमा पनि काम गर्नु हो। म काममा हरेक दिन त्यसो गर्छु। मैले भर्खरै भिस्टा लोड गरें (यो अझै पनि हाइबरनेसन पछि bluescreens) र माइक्रोसफ्ट भिजिओ मानक संस्करण डाउनलोड र पुन: स्थापना गर्न आवश्यक छ। सजिलो, सही? मैले यसलाई माइक्रोसफ्टबाट अनलाइन खरीद गरें त्यसैले म गएर यसलाई फेरि डाउनलोड गर्छु, र यसलाई पुन: स्थापना गर्छु।
म तार्किक ठाउँमा जान्छु, Microsoft डाउनलोड केन्द्र। माइक्रोसफ्ट डाउनलोड सेन्टरको सिल्वरलाइट बीटा छ त्यसैले म यसको लागि जान्छु! म केवल "खोजी डाउनलोड" फाँटमा "भिजियो" टाइप गर्छु। यहाँ के आउँछ पहिले ११ results परिणामहरूको साथ आउँछ:
पहिलो क्रमबद्ध नतिजा के हो? बिलकुल भिजिओ होइन ... यो हो २०० Microsoft माईक्रोसफ्ट अफिस एड-इन: माइक्रोसफ्ट पीडीएफ वा एक्सपीएस को रूपमा बचत गर्नुहोस्। हु? (मँ निकाल्ने प्रयास पनि गरिरहेको छैन किन पहिलो नतीजा # was१ थियो।) त्यसोभए, म पढ्छु र क्रमबद्ध गर्दछु र क्रमबद्ध गर्दछु र १०० नतीजाहरू देखाउँन विस्तार गर्दछ ... म कतै भिजियो पाउँदिन ... केवल केही दर्शकहरू र अन्य बकवासको गुच्छा।
Office साइटमा बन्द! मैले भिजियो अनलाइन खरिद गरेको हुनाले, मैले Microsoft को माध्यमबाट भण्डारमा फर्कन सक्षम हुन सक्ने महसुस गरें। म अलि अलि गर्दै गल्छु, तर मैले यो भेट्टाए ... भिजिओ मानक संस्करण। र बाँया साइडबारमा ... अघिल्लो खरीदहरू! याहू !!!!… एर… मेरो मतलब वाहुओ !!! म अघिल्लो खरीदहरू क्लिक गर्दछु र मेरो इनभ्वाइस नम्बर पप अप हुन्छ। हो !!!! लगभग त्यहाँ!!!! म खरीदमा क्लिक गर्छु र मैले पाएको कुरा यही हो:
आउच म इन्टरनेट एक्सप्लोरर using पनि प्रयोग गर्दैछु ... फायरफक्समा यसलाई जोखिममा पार्न पनि छैन। म मेरो कुकिज खाली गर्दछु। म पछाडि नेभिगेट गर्छु, मेरो इनभ्वाइसमा क्लिक गर्नुहोस् ... र ...।
तपाईं माइक्रोसफ्ट चूसना! वेबमा र बन्द ... तपाईं suck! अब म आज मेरो प्रोजेक्ट पूरा गर्न सक्दिन सफ्टवेयरको साथमा म निराश छु कि तपाईंले मलाई अपग्रेड गर्नुभयो कि मलाई another १ cost० खर्च भयो जुन म डाउनलोड गर्न सक्दिन र प्रयोग गर्न सक्दिन।
मान्छेहरु साँच्चिकै आश्चर्य गर्छन् किन म म्याकमा छु।
कुनै आश्चर्य छैन किन माइक्रोसफ्ट ब्रान्ड गिरावटमा छ। माइक्रोसफ्टका कर्मचारीहरूले आफ्नै उत्पादनहरू, अनलाइन वा अफलाईन पनि प्रयोग गर्नुपर्‍यो कि छैन भनेर जान्न म छक्क पर्नेछु।
केवल किनभने तपाईं सक्नुहुन्छ…
मार्क्स 28, 2008 मा 4: 05 PM
हो, म पनि M$ बकवासबाट बिरामी छु। मैले भर्खरै आउटलुक ०७ मा जहाज हाम फालें र मोजिलास थन्डरबर्डमा गएँ। खुसी लाग्यो। साथै M$ अफिसको बाँकी फोहोरबाट छुटकारा पाउनको लागि छिट्टै ओपन अफिस स्थापना गर्न गइरहेको छ।
साँच्चै छलांग बनाउने विचार गर्दै र अब मेरो मेसिनहरूमा लिनक्स बाहेक केही प्रयोग गर्दैन। यो ढिलो सम्म धेरै प्रयोगकर्ता मैत्री भएको छ र धेरै winblows सफ्टवेयर आज एक लिनक्स संगत विकल्प छ।
निश्चित छैन यदि म म्याक थो प्राप्त गर्न पर्याप्त साहसी छु।
मार्क्स 28, 2008 मा 5: 36 PM
कस्तो दुःस्वप्न !!! Microsh*te! जब हामी जनताले सिक्ने... माइक्रोसफ्ट वास्तविक समस्यामा पर्न गइरहेको छ जब कर्पोरेट समुदायले अचानक महसुस गरे कि उनीहरूले म्याकमा स्विच गर्दा र माइक्रोसफ्ट उत्पादनहरू प्रयोग गर्न बन्द गर्दा उनीहरूले समय र पैसा बचत गर्नेछन्।
मार्क्स 28, 2008 मा 7: 57 PM
र अझै, मैले लेख पढ्दा, तपाइँको प्रविष्टिको तल तपाइँको Google विज्ञापन लिङ्कमा Office 2003 र 2007 खरिद गर्न लिङ्कहरू छन्।
र छेउमा म्याक विज्ञापनहरू, अन्य अफिस एड इन्ससँग मिलाएर।
कहिलेकाहीँ यो साँच्चै रमाइलो छ कि स्वचालित विज्ञापन कोड कसरी सबैभन्दा रोचक समयमा पप अप गर्न सक्छ। तपाईंको पोस्ट "समयमा" विज्ञापनहरूसँग मिलेर मेरो साँझ बनायो 🙂
मार्क्स 28, 2008 मा 8: 32 PM
हा! त्यो सधैं मामला हो जस्तो देखिन्छ, बब! जब म कसैलाई विस्फोट गर्छु, तिनीहरूको विज्ञापन साइटमा हावा हुन्छ। एकदमै हासोलाग्दो।
मार्स 29, 2008 मा 1: 08 एएम
ओपन अफिस यहाँ छ 2.4 र 3.0 अझ एक कदम राम्रो हुनेछ। त्यहाँ एक्स्टेन्सनहरू पनि छन् त्यसैले आजकल यसमा LaTeX प्रयोग गर्न सकिन्छ...
मार्क्स 29, 2008 मा 12: 23 PM
ओम्नीग्राफल प्रो मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। भिजियो जे भए पनि फ्लोट-टेस्टीक हो।
अप्रिल 1, 2008 मा 1: 38 PM
मैले OmniGraffle Pro को साथमा राम्रो भाग्य पाएको छु, जेसन। म चाहान्छु कि यो Visio (वा उल्टो) सँग पूर्ण रूपमा फाइल-कम्प्याटिबल भएको थियो, यद्यपि! मसँग भिजियो प्रयोग गर्ने ग्राहकहरू छन्।
मार्क्स 29, 2008 मा 2: 36 PM
तपाईलाई थाहा छ म्याक यति नराम्रो हुने थिएन यदि यो सबै म्याक व्यक्तिहरूको लागि नभएको भए।" 😉
अप्रिल 1, 2008 मा 1: 39 PM
हा! तपाईं बिल्कुल सही हुनुहुन्छ, माइक। हामी विचित्रको गुच्छा हौं - विशेष गरी म जस्ता मानिसहरू जो विगत २ दशकदेखि एमएस प्रविधिहरूमा गहिरो थिए!
अप्रिल 1, 2008 मा 12: 53 PM
मलाई Microsoft उत्पादनहरूसँग धेरै कम समस्याहरू छन्। ओह, मैले अनलाईनमा धेरै समस्याहरू पाएको छु, तर केही महत्वपूर्ण छैन। इन्टरनेटको सामान्य अविश्वसनीयताका कारण, मैले किन्ने सबै कार्यक्रमहरूको हार्ड-प्रतिलिपिहरू राख्न रुचाउँछु, विशेष गरी जब तिनीहरू महँगो हुन्छन्। पुरानो विद्यालय, मलाई थाहा छ।
यो विडम्बनापूर्ण छ, तर मलाई विन्डोजको तुलनामा म्याक र लिनक्ससँग धेरै समस्याहरू छन्, र खुला स्रोत कार्यक्रमहरूले मसँग कहिल्यै काम गरेको देखिँदैन। यो पक्कै पनि प्राविधिक ज्ञानको कमीको लागि होइन (म DOS को दिनदेखि कम्प्युटरहरू प्रयोग गर्दै आएको छु)।
साथै, किन "Microsoft" लेख्दा मानिसहरूले क्यारेक्टरहरू प्रतिस्थापन गर्छन्? मेरो मतलब, यो वास्तवमा यो हिज्जे बाहिर कुनै न कुनै रूपमा बिल गेट्सको संसारमा शासन गर्ने अपवित्र शक्ति बढाउने जस्तो होइन। यो केवल मूर्ख देखिन्छ।
अप्रिल 1, 2008 मा 1: 48 PM
यो पोस्ट तिनीहरूको साइट संग मेरो निराशा मा एक ठूलो विशाल भेंट थियो। मलाई लाग्छ कि जडान भनेको माइक्रोसफ्ट आफ्नो प्रयोगकर्ताहरूसँग केही हदसम्म विच्छेद भएको छ। मेरो मुद्दा सफ्टवेयरको बारेमा थिएन (यस पटक;), यो वास्तवमै ग्राहक सेवाको बारेमा थियो।
जब सम्म म सम्झन्छु, यो सधैं यस्तै भएको छ। माइक्रोसफ्टले केही हदसम्म पहुँच गर्न नसक्ने भएको छ र दिशा निर्देशन गरेको छ... मापदण्डहरू लागू नगर्ने ब्राउजर भएको, माइक्रोसफ्ट-आधारित अनुप्रयोगहरूसँग मात्र काम गर्ने सुरक्षा मोडेलहरू निर्माण गर्ने, र कागजात मानकहरू जस्तै अन्य मापदण्डहरूलाई बेवास्ता गर्ने जस्ता चीजहरू।
उनीहरूले हासिल गरेका कुराहरूका लागि मसँग धेरै सम्मान छ, तर म विश्वास गर्छु कि अन्तरिक्षमा अरू कसैको लागि तिनीहरूको दुश्मनी तिनीहरूमध्ये उत्कृष्ट हुँदैछ। स्टीव बाल्मर भिडियोमा एक नजरले यो मेरो लागि स्पष्ट पार्छ!
मलाई गलत नठान्नुहोस्, Jobs को पनि आफ्नो quirk छ। यदि तपाइँ भर्खरको वायर्ड पत्रिका पढ्नुहुन्छ भने ऊ ज्याकस हो। तर मलाई लाग्छ कि उहाँको ध्यान यथास्थिति परिवर्तन गर्न र आफ्नो 'कल्ट' को लागि चीजहरू सजिलो र अधिक स्टाइलिश बनाउन प्रयास गर्नमा धेरै राम्रो केन्द्रित छ।
अप्रिल 14, 2008 मा 4: 59 PM
केवल एक नोट, माइक्रोसफ्टले मेरो डाउनलोडको सन्दर्भमा आज, 4/14/2008 डाउनलोडको लागि लिङ्क र स्थापना गर्न उत्पादन कुञ्जीको साथ ईमेलको साथ फलोअप गर्यो।